यी नर्सले ८५ पटक गर्भवती भइन, किन ? | सहारा टाइम्स
Home » samaj » यी नर्सले ८५ पटक गर्भवती भइन, किन ?
यी नर्सले ८५ पटक गर्भवती भइन, किन ?
saharatimes Tuesday, October 27, 20150No comments
एजेन्सी, असम — भारतको असममा एक जना स्टप नर्सले आफू गर्भवती भएको झुठ्ठो आरोपमा पटक पटक ठगी गरेर रकम असुलेको अभियोगमा स्थानीय पुलिसले पक्राउ गरी कारबाही गरेको छ । असमको सरकारी अस्पतालमा काम गर्दै आएकी लिली बेगम सरकार नाम गरेकी नर्सले ८५ पटक गर्भवती भएको झूठो बयान दिएर सुविधान लिइपछि कारबाही गरिएको समाचारमा उल्लेख छ ।
झूठो बयान र प्रमाणका आधारमा लिलीले ४२ हजार ५ सय रुपियाँ मातृत्व सुविधान वाफत दिइने सरकारी सहयोग लिएको जनाइएको छ । पैसाको लोभमा लिलीले गरेको कार्यबाट दिक्क भएको असम सरकारले कारबाही गरेको उल्लेख गरेको छ ।
लिलीले मातृत्वका नाममा दिइएको सुविधा लिनका लागि ८५ पटक गर्भवती भएको प्रमाण अस्पताल प्रशासन समक्ष राखेकी हुन् । तर अस्पताललाई शंका लागेर अनुसन्धान गरेपछि लिलीले सरकारी सुविधान लिनका लागि ८५ पटक गर्भवती भएको प्रमाण पेश गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।